Home > प्रविधि
यदि तपाईले एउटा मोबाइलमा आएको फओन अर्को मोबाइलमा सार्नु पर्यो भने यि ५ तरिका को प्रयोग गरि सार्न सकिन्छ …
Sudur staff January 17, 2018 प्रविधि 0
एउटा मोबाइलको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्‍यो भने यी पाँच तरिका प्रयोग गर्नुहोस् एउटा मोबाइलमा भएको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्ने धेरैलाई परिरहेको हुन्छ । प्रायः नयाँ मोबाइल किन्दा पुरानो मोबाइलको नम्बर सार्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एक–एक नम्बर गर्दै फेरि टाइप गर्नुपर्ने झन्झट नै धेरैजसोले स्विकारेको पाइन्छ । यो निकै झूर तरिका
युटुब भिडियो हालि पैसा कमाउनेहरुका लागी आयो दुखद खबर ….
पैसा कमाउने उद्देश्यले युट्यूब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ ? पर्खनुहोस् ! यूट्यूबले नयाँ नियम लागू गरेको छ । अब स–साना फूटेज भिडियो र सामान्य तरिकाबाट युट्यूबमा पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन् । रमाइला भिडियो र अर्काका भिडियो चोरेर तोडमरोड गर्दै आफ्नो बनाएर पैसा कमाउनेका लागि युट्यूब त्यति सहज छैन अब । यसले
बिदेशबाट चोरीको बाटो भई नेपाल भित्रिएका मोबाईलमा IMI नम्बर दर्ता नभएका मोबाईल अब नेपाली सिमकार्ड नचल्ने, यस्तो छ भावी योजना …
admin January 16, 2018 प्रविधि 0
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी वर्षबाट नयाँ मोबाइल खरिद गर्दा अनिवार्य आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको छ । आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइलमा सिम कार्ड नचल्ने जानकारी दिंदै प्राधिकरणले मोबाइलको अबैध कारोबार रोक्न नयाँ नियम ल्याईएको स्पष्ट पारेको छ । आईएमईआई सुरु भएको २० महिनामा १ करोड ६९ लाखले मात्र
तपाई हाम्रै मोबाईल क्यामेरामा अचम्मैको ग्यारिन्टेड काम ! थाहाँ नभएकाले जान्नै पर्ने नयाँ प्रबिधीसहितको टिप्स …
एजेन्सी । मोवाइलको क्यामेराले फोटो र भिडियो खिच्न मात्र प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईले यसको भरपुर उपयोग गर्न सक्नु भएन ।स्मार्ट फोनमा हुने क्यामेरा अनेक काममा प्रयोगमा आउँछन् । क्यामेरा जोडिएका अनेक एप्स र फिचर्स चल्तिमा छन् । १, भाषाको अनुवाद क्यामेरा मार्फत भाषा र संकेतको पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ । भाषाको
admin January 15, 2018 प्रविधि 0
तपाइले पुरानो एटिएम कार्ड परिवर्तन गर्नुभयो ? यदि परिवर्तन गर्नु भएको छैन भने अब ती कार्डहरुले काम नगर्न पनि सक्छ । पुरानो एटिएम (म्याग स्ट्राइप ) लाई नयाँ प्रविधि (चिप वेस्ड) मा रुपान्तरण गर्न गत वर्ष (२०७३) माघ १७ गते नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो
देश भर फोरजि सेवा सुरु गर्ने तयारिमा -नेपाल टेलिकम …
Sudur staff January 15, 2018 प्रविधि 0
नेपाल टेलिकमले २८ महिना भित्र देशभर फोरजी सेवा संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले १० औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा २८ महिना भित्र देशभर फोरजी सेवा संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा टेलिकमका अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारीले मूल्यांकन समिति बनाएर २८ महिना भित्र देशभर फोरजी सेवा संचालनका लागि आवश्यक काम
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीले धेरै क्षमताको ब्याट्री सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर पनि मोबाइलले धेरै लामो समय ब्याट्री टिकाउँदैन । मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भने ब्याट्री सकिने चिन्ता भइरहन्छ । मोबाइलको ब्याट्री बढाउन यस्ता खालका उपाय अपनाउन सकिन्छ – १. यदि तपाई गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कारको ड्यासबोर्डमा नराख्नुस् । साथै फोनलाई पनि
काठमाडौँ । एनालग प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकभर डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गराउने सरकारी कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक लगाउने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि तोकिएको पेसी निरन्तर सर्दै गएका कारण उक्त कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश
हुर्रे अब देशैभर टेलिकमको फोरजी सेवा
Ganesh Thagunna January 14, 2018 प्रविधि 0
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २८ महिनाभित्रमा देशभर फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । टेलिकमले १० औं वार्षिक साधारणसभाको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी २८ महिनाभित्र देशभर फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको हो । कार्यक्रममा टेलिकमका अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारीले मूल्यांकन समिति नै बनाएर २८ महिनाभित्र देशभर
admin January 12, 2018 प्रविधि 0
यसरी लुकाएर राखिएको हुन्छ वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै ह्याक गर्ने तरिका सिक्नुहोस… अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने